Komiin rakkoo ibsaa furamuufii laata? - BBC News Afaan Oromoo
Komiin rakkoo ibsaa furamuufii laata?
Goodayyaa suuraa Bulchiinsi humna ibsaa sadarkaa Oromiyaatti hundeeffamuun komii jiru furuuf ni gargaara
Waajjirri Tajaajila Humna Elektrikii sadarkaa Oromiyaatti banamuun isaa uummatatti dhiyeenyaan akka tajaajilu godha, jedhan itti gaafatamaan sab-quunnamtii biiroo Bishaanii Albuudaafi Inarjii Oromiyaa obbo Abbulee Abagaaz.
Itti waamamni isaas godinaaleetti bulchiinsa godinootaaf yoo tahu, Oromiyaatti immoo mootummaa naannoo Oromiyaaf taha, jedhan.
Kunimmoo hojicha dhiyeenyatti hordofuufi gamaaggammufi ni gargaaras jedhaniiru itti gaafatamichi.
Gama biraan immoo kana dura buufataalee seektara kanaa yeroo baayyee namoota Afaan Oromoo hin dandeenyeen hogganamaa turan, waajiraalee 9 godinoota wiirtuu godhachuun amma banaman keessatti hojii gaggeessitoota Afaan Oromoo danda'a ramaduun uummanni afaan isaatiin tajaajila akka argatu tumsa jechuun obbo Abbuleen BBC tti himan.
Karaa biraa baayinni uummata keenyaa harka walakkaa biyyattii waan taheef faayidaa uummataa haala kabachiisuufi haqa qabuun bajatni ramadamee uummanni ibsaa hin argatiin ture rakkoonsaa akka furamuuf hojjechuu dha jedhan itti gaafatamaan kun.
Dhimma ibsaan ammas ammas baduu...
Kana dura, baajata baayyina uummata Oromiyaa gitu qabatanii hojii karaa guutuu hojjechuun rakkoo ture.
Sabisteeshinii yookiin buufataaleen xixiqqaa ibsaan irraa raabsamu naannoo biraa keessa dhaabbatan Oromiyaa keessaa godinaalee baayyee qaxxaamuraniitu deemu.
''Buufataalee kana bakkeewwan mijataa tahetti dhaabuun ciccituu ibsaa bal'inaan ni hambisa jedhametu yaadamaa'' jedhu obbo Abbuleen
Qarshiin uummanni akka bishaaniifi ibsaan galuufi walitti qabee kaazinaa mana hojii kanaatti galee sababii tiraansformarii argachuu dhabuurraan hojii irraa otoo hin ooliin turuunsaa komii uummata biraa kaasaa ture kan jedhan obbo Abbuleen, kana dura tiraanisformarii dhaabbata mootummaa METECH jedhamu qofa irra bituun danda'am tures jedhaniiru.
Waajjirri kun kaampaaniiwwan tiraanisformarii oomishan biroo irraa maallaqa uummataafi mootummaa irra argame fayyadamuun daddafee bakkee rakkoon jirutti akka galuuf karoorfamee jira jedhan itti gaafatamichi.
''Bishaan lubbuu dha...''
Qisaasessama fi hanna waggaa 27 f adeemsifame dhaabsisuuf haaromasa jabaa waajjirri keenyi taasiseen gaaffii uummataa deebisuu itti adeeemaa jira.
''Bishaan lubbuu dha, inarjiin lubbuu dha albuudni immoo guddina diinagdee keenyaa dagaagsuu keessatti murteessaa dha'' kanaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan uummata tajaajiluuf hojjechaa jirra jedhan itti gaafatamaan kun.
Kana dura mootummaa Federaalaatu caaseefama isaa naannoleetti banuun tajaajila kennaa ture. Damee odeeffannoo hojii-maata guutuu kennuu hin dandeenyeen hojjechaa ture.
Kunis, komii hammaataa uummataa daangaa hanga daangaatti kiraa sassaabdummaa lakkooftuu, ibsaa kukkutuufi balleessuu wal-qabate irratti turetu qoratame sadarkaa biyyaatti deebii akka argatu taasifame.
Waajjirichi godina addaa naannawaa Finfinee, Amboo fi Naqamtee dabalatee waligalatti damee sagaliin bara 2011 A.L.I irraa qabee guutummaan guutuutti hojii jalqaba jedhan obbo Abbuleen.
OMN Finfinneetti sagantaa raadiyoo Afaan Oromoon eegaluufi
Hoomaan awaannisaa Itoophiyaa weerare
Dhiironni maaliif dubartoota caalaa of ajjeesuu?
Gaazexessaan oduu dharaa himee jedhame to'annoo jala olfame
Bakakkaan namoota afur ajjeesee, 100 madeesse
''Manni keenya gubachaa jira''
Moqadishoon kantiibaa haaraa muuddatte